Malay Chin Ralzaam Sin UNHCR He Tonbiaruahnak Thawngthanhnak – Chin World News Evening
Malay Chin Ralzaam Sin UNHCR He Tonbiaruahnak Thawngthanhnak
UNHCR he Tonbiaruahnak Thawngthanhnak (အသိပေခြင်း) Malaysia um Chin ralzaam hawikom dawt hna tu ni (February 5, 2021) ah UNCHR lutlai le Chin ralzaam bu hna cu online tonbiaruahnak naih asi. Hi tonbiaruahnak ah UNHCR lei nih an chimmi cu:
4. Cun UN card/ Catlap chuh cangmi le RSD interviewasungmi zong nih case onpiak than (ruahpiak than) ding in catial khawh asi tiah an chim. Sinain onpiak khawhnak ding le ruahpiak khawh thannak ding ah tete (evidence) langhter chihahau i mah hnu ah zoh thanpiak awkathat le that lo kan ruah lai tiah an chim. Cun RSD email ah ca in kuat khawh asi.
Independent Chin Communities (ICC) ချင်းအဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်များနှင့် UNHCR အစည်းဝေး. ယနေ့ ၀၅၊၀၂၊၂၀၂၁၊ ညနေ ၄ နာရီ မှ ညနေ ၅နာရီအထိ Independent Chin Communities (ICC) ချင်းအဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်များ နှင့်UNHCR လူကြီးမင်းများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆွေးနွေးချက်များများအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် – ၁။ လူသစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် UNHCR မှအဓိကထားသောအချက်ဖြစ်သော်လည်းစတင်ရန်ပြင်ဆင်နေချိန် မှာဘဲ အစိုးရ၏လှုပ်ရှားသွားလာမှုပိတ်ပင်ခြင်း
များကြောင့်အကောင်ထည်မဖော်နိုင်ဖြစ်နေပါသည်။ သို့သော် ဤပိတ်ပင်ခြင်းကာလပြီးဆုံးချိန်တွင်အကောင်ထည်ဖော်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဒုက္ခသည်လူသစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင် နေရာဒေသ၊လူမျိုးအခြေခံပြီးသတ်မှတ်မည်မဟုတ်ဘဲ UNHCR ၏စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း မိမိကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအမှုတွဲထွက်ဆိုချက်ပေါ် တွင်သာသုံးသပ်စီစစ်ပြီးမှတ်ပုံတင်သင့်မသင့်ကိုသတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ အဖမ်းခံနေရကြရသောဒုက္ခသည်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်း UNHCR ၏အဖမ်းဆီးတာဝန်ခံဌာန (OPI) ဘက်မှလည်း အစစအရာရာအဆင့်သင့်ဖြင့်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး ဤပိတ်ပင်ခြင်းကာလပြီးဆုံးနှင့်ချက်ချင်းလိုအပ်သည်များကို ဆောင်ရွက်သွားတော့မည်ဖြစ်ပါသည်။
၃။ တတိယနိုင်ငံပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ကိုဗစ်ကာလပြီးဆုံးပါက လူမျိုးခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ တတိယနိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်သင့်သူများအားလုံးကိုတန်းတူပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄။ ၂၀၁၃ ကဒ်/စာရွက်အသိမ်းခံရသူများအနေဖြင့် မိမိ၏အမှုတွဲကိုပြန်လည်ဖွင့်ပေးစေလိုပါက ပြန်လည်ဖွင့် ပေးရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါပြီ။ သို့သော် ထိုသုိ့တောင်းဆိုခြင်းကို လိုအပ်သောအချက်လက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြင့် email မှပေးပို့ခြင်းဖြင့်စာတင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းအချက်လက်များအပေါ်တွင်အခြေခံပြီးပြန်လည်ခေါ်ယူ ပြီး UN ကဒ်/စာရွက်ပြန်လည်ပေးသင့်မသင့်ကိုဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စာတင်လိုသူများအနေဖြင့်email ထဲတွင်အောက်ပါအတိုင်းရေးရမည်-
Subject line တွင် REOPENING REQUEST + ( UNHCR နံပါတ်) ကိုရေးပြီး
ာကိုယ်တွင်မိမိလက်ရှိသုံးနေသောဖုန်းနံပါတ်နှင့်အတူအချက်လက်များပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးသားပြီးမှ မိမိ email ဖြင့် mlslursd@unhcr.org သို့ပေးပို့ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Ref: Chin Refugee Committee, Malaysia
Breaking News: Ralkap Nih Uknak (Aa-naa) Lakmi Kongah Anmah Ralkap Phu Lila Nih Duhlonak Cathanh An Chuah!